कृषि क्षेत्रमा पोल्ट्रीको योगदान उच्च – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कृषि क्षेत्रमा पोल्ट्रीको योगदान उच्च
२०७१ पुष १८, शुक्रबार ०३:२१ गते
भरतपुर । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. गोविन्दराज पोखरेलले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पोल्ट्रीको योगदान उच्च रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् ।
दोस्रो राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवसको अवसरमा भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बिहीबार पोखरेलले यस क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्न किसानमैत्री नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । पछिल्लो समय नेपाल पोल्ट्री व्यवसाय आत्मनिर्भर बन्दै गएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि डा. पोखरेलले सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई गरिबी राष्ट्रबाट विकसित मुलुुक बनाउन सरकार लागेको दाबी गरे । देशलाई विकसित बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी अत्यावश्यक रहेको उनले बताए । विकसित राष्ट्र बनाउनका लागि प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ९७ खर्ब उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यसमध्ये दुई तिहाइ लगानी निजी क्षेत्रबाट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीभन्दा पनि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको विचार थियो ।
कार्यक्रममा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशव प्रेमीले कुखुरापालनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पु¥याएको योगदानको चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा पोल्ट्री व्यवसायी डा. तिलचन्द्र भट्टराई र रामपुर क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. होमबहादुर बस्नेतले पोल्ट्रीको वर्तमान अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
भारतबाट भित्रने अवैध चल्लाको कारण नेपालको पोल्ट्री बजार समयसमयमा तलमाथि हुने गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले गुनासो राखेका थिए । साथै उनीहरुले अवैध चल्ला भित्रन नदिन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।
कुखुरा व्यवसायी मञ्च चितवनका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल, पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट, अण्डा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसी, स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेलगायतले बोलेका थिए ।